Maya Magazine: ကျမတော်တော်ညံ့ခဲ့ပါတယ်ဟောပြောသူ- ဂျူး
(၁၉၉၆ လောက်က ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်မှာ ဟောပြောချက်ကို ဒေါင်းအိုးဝေ စာစောင်( ? ခုနှစ်) မှ ကူးယူ ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။)
ကျေးဇူတင်ခြင်း- စာပိုဒ်အကျကို ဖြည့်ပေးတဲ့၊ စာဟောတဲ့ ခုနှစ်ကို ဖြည့်ပေးတဲ့၊ ကျောက်ဖြူ ဘလော့ဂါ ကို မာယာက ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောချင်ပါတယ်။
Posted by Maung Aye Win at 11:22 AM
အရင်က ကက်ဆက်ခွေအနေနဲ့ နားထောင်ခဲ့ရဖူးတဲ့ ဟောပြောချက်ကို အခုလို ဖတ်ခွင့်ရအောင် တင်ပေးတဲ့ ကိုအေးဝင်း(လမင်းတရာ) ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အတူ ဟောပြော ခဲ့ကြတဲ့ ဒေါက်တာတင်မောင်သန်းနဲ့ ဆရာအော်ပီကျယ်တို့ ရဲ့ဟောပြောချက်တွေကိုပါ ဖတ်ကြ ရရင် ပိုကောင်းမှာပဲလို့ မျှော်လင့် တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေ။
If I not wrong, 1995
I attended when i was 1st yr in RIT.
ဆရာမ ဂျူးကိုရော၊ ကိုအေးဝင်းကိုရော။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ
အရမ်းကောင်းတာပါပဲ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဆရာမရဲ့စာတွေ မှန်သမျှ ကြိုက်နှစ်သက်မိပါတယ် ..
Thanks for sharing this.. She is my favourite Author.. Although I've read all of her books, I've never listen to her talk before..
So coincidence, received this link just before I go to Sayarma Juu:'s Literature talk.. only one andahalf more day to go ... Pyaw lite tar :)
ဆရာမကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာ၊ ရင်ထဲမှာ ကျန်နေအောင် ပြောတတ်တယ်၊ ဆရာမရေ ကျမတို့က ပိုပိုပြီးညံ့တယ်၊ ဆရာမညံ့တယ်ဆိုတာတောင် အနည်းဆုံး ကျမတို့ရင်ထဲရောက်အောင် စကားလေးတစ်ခွန်းလောက်ဖြစ်ဖြစ် ကျန်နေခဲ့အောင် လုပ်ပေးနိုင်သေးတယ်၊ ကျမတို့ကတော့ ဘာတာဝန်မှကိုမကျေတဲ့ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် လူတွေပါပဲ၊ အရမ်းညံ့နေတယ် ဆိုတာ ဆရာမလိုပဲ ၀န်ခံ ပြီး တော်အောင်ကြိုးစားပါ့မယ် ဆရာမ၊ ဝေမျှသောသူအားလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်လျှက်
SUE NITT said...
Appreciate for your sharing and Great Thanks to your time consuming....!!!
A heap of thanks to you and my favourite author ,ju.....
KYAUK PHYU said...
ဂျူးဟောပြောချက်ကို စာရိုက်ရာမှာ ကျကျန်ခဲ့တဲ့ နေရာအတွက် ကျနော်မှတ်မိသလောက် ဖြည့်စွက်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း ပြန်လည်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ဖြည့်စွက်ထားတဲ့နေရာကို အရောင်နဲ့ ပြထားပါတယ်။
ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပဲဆရာမဂျူးရဲ့ဟောပြောချက်ကို ကျနော် ကိုယ်တိုင် '၉၅-၉၆တဝိုက် လောက်က မန္တလေးမြို့ ၈၄-လမ်း(?) ဓမ္မသာလာ ဗိမာန်မှာလည်းသွား နားထောင်ဖူးတယ်ဗျ။ ကျနော်မှတ်မိနေသေးတာက အဲဒီ ဟောပြောပွဲမှာ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်နှင်းယု( “ချစ်တာ တခုပဲသိတယ်” ကိုဟောပါတယ်)၊ ဆရာတင်မောင်သန်း၊ ဆရာအော်ပီကျယ်၊ ဆရာတင်မိုး(?)တို့လည်းပါကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပဲရန်ကုန်RIT မှာလည်း ဟောပြောခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်ပါတယ်။ နောင်အခါ တနေရာတည်းမှာပဲဟောပြောခဲ့တယ်လို့